Home » Opinions & Discussion » စိန်ရဲမှစိန် Daring you!
တောက်ကြောင်ဇုတ်… အနှောင့်အသွားလွတ်အောင် မရေးဘူး….
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလဲ သူ သမ္မတ ဖြစ်ရေး ကို ရှေ့မတင်တော့ တာ အားလုံး သိ ပြီ။
Lateral Thinking ကလေး လှသဗျ…
ပြည်သူ ကို ပါးရိုက်မဲ့ဘက်
ဘွားဒေါ်က ပါတီဥက္ကဌအနေနဲ့ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးပဲလုပ်။
သမ္မတရဲ့ ပီအေ နေရာလောက်ရအောင်ခုကတည်းက ဒီကြောင်ကို နိုင်ကွက်ရှာထားမှ။
၁၀၀% နဲ့ ၅% တည့်လဲပေးးရမယ်ပေါ့??
ဦးသိန်းစိန်ကို တော့ သရက်ခြံ ပို့ ….